Fadlan ka qayb qaado fikir-ururinta: London Conference on Somalia: Building Momentum – M. Harun | Building Momentum
Fadlan ka qayb qaado fikir-ururinta: London Conference on Somalia: Building Momentum – M. Harun
Dawlada Ingiriisku waxay qorshaynaysaa shir bisha February ee inagu soo aadan London lagu qaban doono! Shirkaasi oo afartameeyo wadan iyo ururo caalami ahi ay kala soo qayb gali doonaan Soomaalida iman doonta, si guudna loogu eegaayo arinta dadka Soomaaliyeed, laakiin aanay Ilaa hadda go’aan cadaan ah Somaliland ka gaadhin waxa ay ka yeelayso, ayaa qolyaha qabanqaabinayaa ay website fikir-ururin loo sameeyay u fureen.
Web kaas ama block gaas waxa fikirkooda ku qoray dad badan oo tilmaamo siiyay dawlada Ingiriiska, waxaana qurux badan dadka Reer-Somaliland inay fikir-ururinta shirkas ka qayb qaataan oo waxa dantaa Somaliland iyo Soomaalida kaleba ay ku jirto ay dawlada Ingiriiska u sheegaan. Fikirka page kaas laga ururinayaa wuxu qayb muhiim ah ka noqonayaa sida ay qolada qabanqaabadu uga fikirayaan arinta hor taala. Web kii waaka hoos ku xardhan ee xidhiidhiyaha hoos ku yaala ha click garayso cidii jecel inay fikradaha akhrido ama wax ku darsato.